कतै तपाईलाई पनि यस्ता संकेता देखा परेका छन ? बेलैमा थाहाँ पाउनुहोस यस्तो अवस्थामा अधिक धनलाभ हुने - सुदूरखबर डटकम
कतै तपाईलाई पनि यस्ता संकेता देखा परेका छन ? बेलैमा थाहाँ पाउनुहोस यस्तो अवस्थामा अधिक धनलाभ हुने
label सुदूर खबर संवाददाता query_builder २९ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०९:०३
यस्तै खालका संकेतकामा सपना पनि एक माध्यम हो । केही संकेत यस्ता हुन्छन ,जसले हामीलाई धन प्राप्त हुने बारेमा पहिलेनै जानकारी दिन्छन् ।
त्यस्ता संकेतलाई सम्झनु आवश्यकता हुन्छ । केही यस्ता संकेत छन् जसले भविष्यमा कसरी धन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पहिलेनै संकेत दिन्छ । जुन बुदाँगदरुपमा यसप्रकार छन् :
१६. शुक्रबारका दिन केशरी रँगको गाई देखियो वा दर्शन गर्ने मौका पाइयो भने धनप्राप्ति हुन सक्छ । यदि कोई यात्री घर फर्कि रहेको हुन्छ र बायाँ तिर रोकियो भने उसलाई थोरै समयका लागि धनप्राप्त हुन सक्छ । यदि कुनै व्यक्तिले कुनै गाउँ वा नगरमा प्रवेश गर्ने समयमा दायाँ तर्फ सुँगुर देखियो भने उसलाई धन प्राप्त हुन सक्छ ।
१७.सपनामा हरियो फुलबारी तथा अनार र उँट देखियो भने धन प्राप्ती हुने योग बन्छ । कहिँ जाँदै गरेको अवस्थामा यदि बाटोमा सुन्दर महिला या कन्या देखियो भने त्यसलाई धनप्राप्तीको संकेत मान्न सकिन्छ ।
१८.यदि कोही सपनामा टाउको कन्याउँदै गरेको देखियो भने त्यसकै कारण पैसा मिल्न सक्छ । यदी आँखा कन्याउँदै गरेको देखे भने पनि पैसा मिल्न सक्छ । सपनामा गाडेको धन देखियो भने पनि सम्पत्ति वृद्धि हुन सक्छ । यो सबै पढेर सच्चा मनले १ शेयर अवस्य गर्नुहोला । नेपालखबरबाट